Ndị WHO akatọla nkesa enweghị ọgwụ mgbochi okpueze ọhụrụ
site na nchịkwa na 21-01-22
World adịghị njikere maka oria ojoo nke Covid-19 ma ọ dị mkpa ime mkpebi siri ike yana nke dị irè iji belata mbibi nke ọrịa na-efe efe kpatara, otu ọrụ nnwere onwe na-akwadebe na nzaghachi, nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-eduzi, kwuru na akụkọ. wepụtara na Mọnde. Nke a bụ ...
Achọpụtara coronavirus ọhụrụ na Germany
Achọpụtala ụdị ọhụrụ nke nje Covid-19 na Bavaria, ndịda Germany, ihe akaebe nke mbụ na-egosi na ụdị ahụ dị iche na nke ama ama. Achọtara eriri ahụ n'otu obodo dị na Bavaria. Ekwenyere na achọpụtara ụdị nje ọhụrụ a n'ime mmadụ 35 n'ime mmadụ 73 enwetara…
Achọpụtala ụdị dị iche iche 18 nke nje corona na nwanyị na Russia
Na akụkọ Jenụwarị 13, n'oge na -adịbeghị anya, ndị ọkà mmụta Russia chọpụtara ụdị ọrịa corona mmadụ iri na asatọ n'ime ahụ nwanyị nwere obere mgbochi, akụkụ nke ụdị na nje ọhụrụ dị iche pụtara na Britain bụ otu, enwere ụdị mgbanwe abụọ. ya na ndị Danish min ...
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300,000 ikpe COVID-19 ka akọpụtara n'ụwa niile n'otu ụbọchị. A hụla ụdị nje dị iche iche n'ọtụtụ mba
site na nchịkwa na 21-01-09
Dika onu ogugu ohuru sitere na Mahadum Johns Hopkins, rue oge nke 2027 Beijing na August 16, ọnụ ọgụgụ ndị kwenyesiri ike na COVID-19 n'ụwa niile karịrị nde 21.48, ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ akarịala 771,000. Healthtù Ahụ Ike saidwa kwuru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300,0…
Achọpụtara ụdị COVID-19 gbanwere agbanwe na Slovakia
Ka ọnwa Jenụwarị 4, Marek Kraj I, onye minista ahụike Slovakia, kwupụtara na mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọkachamara ahụike achọpụtala mutant Novel Coronavirusb.1.1.7, nke malitere na England, na Michalovce na ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, n'agbanyeghị na ọ chọpụtaghị. gosiputa onu ogugu nke mut ...
Indonesia bidoro mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Dị ka mba nke anọ kachasị ọnụ ọgụgụ mmadụ n'ụwa, Indonesia bụ obodo kacha emetụta na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ndị na -ahụ maka nri na ọgwụ ọjọọ na Indonesia (BPOM) kwuru na n'oge adịghị anya ọ ga -akwado iji ọgwụ mgbochi sinovac mee ihe mberede. Ministri ahụ ekwuola na mbụ na -atụ anya inye…